About Us – Gliders Helmet - Biggest Online Helmet Store in Myanmar
Stanol Myanmar LLC introduces you toawide range of helmets for Motorcyclists Safety under its brand names GLIDERS and NXT. The company places Quality and Safety first in its priority list for every production it undertakes.
GLIDERS is associated with manufacturing of motorcycle helmets and accessories for over 25 years. We manufacture products that are beautifully detailed, particularly distinguished by standards of safety, quality, aesthetics, comfort and are reasonably priced. Gliders increases its limits to satisfy the increasingly demanding motorcycle enthusiasts every day.
Expertly guided by the entrepreneurship and passion that has always distinguished Mr. Rajesh Thakkar and his family, the Team takes the field every day, armed with skills and expertise to create products that are always at the top. We also believe the main strength of the company lies in the comprehensive range of products and an extensive network of dealers & distributors across the country. Behind the growth of the company is its philosophy of relationship.
We Delivery all Over Myanmar with Cash on Delivery !
ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Gliders နဲ့ NXT ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆ်ိပ်များဖြင့် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်မျိုးစုံကို TP Industries ကနေထုတ်လုပ်ရောင်းပေးနေပါတယ်။
Gliders ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ၊ အရည်အသွေး ၊ ဒီဇိုင်း ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း နဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး လှပသပ်ရပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဂုဏ်ယူစွာထုတ်လုပ်နေပါတယ် ။
ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ အားကစားနဲ့ အခြားလုံခြုံရေးဦးထုပ်များကို NXT ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာ ထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲပိုမိုနေရာယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသုံးပြုသူတို့ လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ အရောင်အသွေးအစုံအလင်ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုနောက်ကွယ်မှာ ယုံကြည်မှုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးက ကိန်းအောင်းနေပါတယ်။
“YOUR SAFETY IS OUR CONCERN” ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လမ်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ လမ်းကြမ်းမှာပဲဖြစ်စေ လူကြီးမင်းတို့ဆိုင်ကယ်စီးနေချိန်မှာ ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။